विश्व , विविध
जनतापाटी डेस्क मंगलवार, भदौ २४, २०७६, ०३:२९:०० मा प्रकाशित
रोवर्ट मुगावे सन् १९८० देखि जिम्बावेका प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रपति बनेर १९८७ बाट २०१७ सम्म काम गरे; जबसम्म उनलाई बलपूर्वक राजीनामा दिन लगाइएन ।
मुगावे को थिए ?
रोवर्ट मुगावेको जन्म सन १९२४ फेब्रुअरी २१ मा जिम्बावेको कुमाटा भन्ने ठाउँमा भयो । उनले १९६३ मा जानू नामको राजनीतिक संठगनको स्थापना गरेर ब्रिटिस कोलोनाइजेसन विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । ब्रिटिस कोलोनाइजेसनको अन्त्य भएपछि मुगावे नयाँ गणतान्त्रिक जिम्बावेका प्रधानमन्त्री भए । त्यसको सात वर्ष पछि नै उनी जिम्बावेका राष्ट्रपति बने ।
उनले एक विरोधाभाषी र अशान्तिपूर्ण चुनाव गराएर राज्यसत्ताको सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिए । उनी त्यतिवेलासम्म राष्ट्रिपति बने जबसम्म उनलाई बलपूर्वक राजीनामा गर्न लगाइएन । उनी ९३ वर्षको उमेरमा सत्ताच्युत भएका थिए ।
उनको बाल्यकाल र शिक्षा
रोवर्ट ग्याब्रियल मुगाबे दक्षिणी रोडेसिया (आजको जिम्बावे) को कोमाटामा जन्मिएका हुन । उनी जन्मनुभन्दा केही महीना अगाडि मात्र त्यतिबेलाको रोडेसियामा ब्रिटिस साम्राज्यको छायाँ पर्यो । ब्रिटिसको कोलोनाइजेसनको समयमा उनी जन्मिए । उनका गाउँका मानिस ब्रिटिस सत्ताबाट शासित थिए । अफ्रिकन काला मानिसहरुलाई शासन गर्न आएका ब्रिटिसले उनीहरुलाई न राम्रो शिक्षा दिए न नोकरी नै ।
मुगावेका बुवा काठको काम गर्थे । मुगावे सानै उमेरको रहँदा जेस्वितर्फ काम गर्न लागेका उनका बाबु कहिल्यै घर फर्केर आएनन् । उनको मनमा बाबुको धमिलो छाँयामात्र आइरह्यो । मुगावेकी आमा एक शिक्षिका थिइन तर उनले आफ्नो छोराछोरीको स्याहार सुसार गरिनन् । आफूसहित ३ बालबालिकाको जिम्मेवारी मुगावेमाथि नै आइपर्यो । उनले गाई चराउने र केही अरु काम गरेर परिवार पाल्न थाले ।
दक्षिणी रोढेसियाका अधिकांश मानिसहरु अक्षर चिन्नसक्ने मात्र शिक्षित थिए । तर मुगावेले भने राम्रो शिक्षा पाए । यो उनको भाग्य नै भन्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ रहेर शिक्षा पाउनु जटिल थियो । उनी ओहियाको सुपरभिजनमा रहेको स्थानीय जेस्विट मिसन विद्यालयबाट शिक्षा लिएका थिए । उनको राम्रो प्रगति देखेर आहियाले उनलाई विषेश कक्षा दिइएका थिए । सबै मानिसलाई समताका आधारमा व्याहार गर्नुपर्छ र काम गरेर आवश्यक्ता पूर्ती गर्न सक्नेगरिको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतना आहियाले दिएका थिए ।
मुगावेका शिक्षक उनलाई ‘एक चलाख केटा’ भनेर बोलाउँथे । उनको क्षमता देखेर नै शिक्षकले सो नामले पुकार्ने गरेका थिए ।
मुगावेले शिक्षकले दिएका नामलाई सावित गरेर देखाइदिए । उनी आफैं शिक्षक बनेर आफूले पाएको शिक्षाको प्रतिध्वनी दिन पछि परेनन् । ९ वर्षको विद्यालाय शिक्षा पछि उनी स्वअध्ययनमा लागे ।
स्व–अध्ययनन सँगै रोढेसियामा शिक्षणको काम पनि गरे । मुगावेले आफ्नो शिक्षा फोर्ट हेयर विश्वविद्यालयबाट पुनः निरन्तर गरिरहे । अन्ततः सन् १९५१ मा इतिहास र अंग्रेजि विषयमा स्नातक गरे । त्यपछि शिक्षण कामका लागि मुगावे आफ्नो गाउँ फर्किए । उनले सन् १९५३ मा शिक्षाशास्त्रमा पनि स्नातक गरे ।
१९५५मा उनी उत्तरी रोढेसियातिर लागे । चार वर्ष क्यालिम्बाना ट्रेनिङ क्याम्पसमा पढाए । तर आफ्नो पढाइ भने छोडेनन्, लन्डन विश्वविद्यालयकै बराबरी कोर्स भएको क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा स्नतक गरे ।
जब उनी घाना गए, १९५८मा अर्थशास्त्रको स्नातक पनि पुरा गरे । सेन्ट म्यारी शिक्षक प्रशिक्षण कलेजमा प्रशिक्षण गरे । त्यहाँ नै उनले आफ्नो पहिलो जीवनसंगिनी पनि पाए, उनको नाम थियो – सराह हेफ्रन । हेफ्रनसँग पछि १९६१ मा विवाह गरे । घानामा रहँदा उनले आफैंलाई माक्र्सवादी भनेर घोषणा गरिदिए । यसैका दौरान उनले घानीयन सरकारको सानोे वर्गका मानिसलाई लक्षित सबैलाई बराबरी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको समर्थन गरेका थिए ।
राजनीतिक यात्राको सुरुवात
मुगावे विदा मनाउन आफ्नो गाउँ फर्किए, आफ्नी आमालाई (आफ्नी प्रेमिका) सँग भेट गराउन गाउँ फर्किएका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा परिवर्तन भएको गाउँको अवस्थाले उनी हातमा दहि जमाएर बस्न सकेनन् । ब्रिटिस सत्ताका कारण हजारौं काला जातिका मानिसहरु आफ्नो ठाउँ छोडेर विस्थापित भएका थिए ।
सरकारले काला जातिको बाहुल्यता भएका मानिसले बनाएका कानुनलाई अस्वीकृत गरेको थियो । जसका कारण रोढेसियामा आन्दोलन चर्किन थालेको थियो । मुगावे आफैं पनि काला जातिको अधिकार खोसिएका कारण आक्रोशित थिए ।
सन् १९६० मा उनी सात हजार मानिस भएको एक सभामा अंग्रेज विरुद्ध बोल्न तयार भए । त्यो कार्यक्रम हरारेको टाउन हालमा राखिएको थियो । आफ्ना लिडरहरुको रिहाको माग गर्दै ब्रिटिस सरकार विरोधिहरुले आयोजना गरेको भेलामा उनले प्रवचन दिए । उनले माक्र्सवादका कारण कसरी घानाले सफलता र स्वतन्त्रता पायो भन्ने विषयमा बोलेका थिए ।
त्यसपछि उनी पनि प्रहरीको तारो बने ।
त्यसको एक हप्तापछि नै मुगावे राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक पार्टीको सचिव पदमा निर्वाचित भए । घानाकै मोडेलको आधारमा उनले मिलिटरी युवा लिगको संयोजन गरे । यो लिगबाटै उनले विश्वमा कसरी कालाहरुले स्वतन्त्रता पाएका छन् देखाउन चाहन्थे ।
सन् १९६१ को अन्त्यमा आएर सरकारले मुगावेको पार्टीमाथि बन्देज लगायो । तर मुगावेका अन्य सहयोगी मिलेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरे । यो रोढेसियामा भएको पहिलो घटना थियो । त्यसपछि जिम्बावे अफ्रिकन पिपोल्स यूनियन (जापू) को जन्म भयो । यसले ४ लाख ५० हजार मानिसको अपत्यारिलो साथ पायो ।
युनियनमा लिडर जोसुका निम्कोलाई युनाइटेड नेसनले छलफलका लागि बोलायो । उनीहरुले आफ्नो संविधानलाई फिर्ता लिन र ब्रिटिसको शासनबाट अलग्गिन माग गरे । समय बित्यो तर केही पनि परिवर्तन हुन सकेन् । मुगावे र अन्य साथिहरु न्कोमोसँग निराश बने । किनभने न्कोमोले यनाइटेड नेसन्सलाई जोर दिन सकेनन् ।
काला जातीलाई संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बारेमा उनीहरुमा माग न ब्रिटिस सरकारले सनुवाई गर्यो न युुनाइटेड नेसनले नै । त्यसैलै उनीहरुको त्यो निराशाले अप्रिल १९६१ मा मुगावेले सार्वजनिक रुपमै गररिल्ला युद्धको विषयमा बोल्न थाले – उनले देशको प्रहरीसँग पनि भने, ‘हामी यो देश फिर्ता लिँदैछौं र हामी यो निराशाको थप शिकार हुन सक्दैनौं ।’
सन् १९६३ मा मुगावे र पहिले न्कोमोका समर्थकहरु मिलेर आफ्नै जनताहरुको आदोलन सुरु गरे, यसलाई जिम्बावे अफ्रिकन नेसनल युनियन (जानू) भनियो । यसको उत्पत्ति तान्जानियाँमा भएको थियो । उनी दक्षिण रोढेसियामा आएपछि उनलाइै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । मुगावेलाई पहिले सिकन्नेलाको ह्वाह्वा जेलमा र पछि सेलिस्ब्रुरी जेलमा राखिएको थियो ।
उनी त्यही जेलमा दशकौं सम्म पनि रहन सक्थे तर उनलाई गुरिल्ला संगठनसँग गोप्य रुपमा सञ्चार बढाएको भन्दै सिकोम्बेलाको जेलमा लगिएको थियो ।
१९७४ मा प्रधानमन्त्री लान स्मिथले आफू साँचो बहुमतको शासन पाउने दाबी गरेर मुगाबलेलाई जाम्बियाको एक सम्मेलनमा उपस्थित हुन छुट दिइयो । तर सो मौकाको फाइदा उठाउँदै मुगावे भाग्न सफल बने । उनलाई जिम्बावेको गुरिल्लाले भाग्न साथ दिएको थियो ।
७० को दशकको अन्त्यमा आएर गुरिल्लाको आन्दोलन अत्यन्तै क्रोधित बनेको थियो । दशकको अन्त्यमा आएर जिम्बावेको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै नाजुक थियो । १९७९ को अन्त्यमा आएर प्रधानमन्त्री स्मिथले मुगावेसँग वार्ता गर्न एक प्रयास गरेका थिए । सो वार्तापछि ब्रिटिसले कालाहरुको अधिकारको कदर गर्ने गरि सम्झौता भयो । साथै युएनले प्रतिबन्ध हटायो ।
सन १९८० मा दक्षिण रोढेसिया ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र बन्यो र स्वतन्त्र गणतान्त्रिक जिम्बावे नामाकरण गरियो । जिम्बावे जानू पार्टी अन्तर्गत मुगावेको हातमा आयो र उनी जिम्बावेका प्रधानमन्त्री चुनिए । उनले अर्का नेता न्कोमालाई हराएर प्रधानमन्त्री बने । नेता मुगावे र न्कोमोका फरका एजेन्डाका कारण दुई पक्षमा विभाजित भएका थिए । अन्त्यमा यी दुवैले जानू र जापू दुई पार्टीका संचालक बने ।
मुगावे सन् १९८५को चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा निवाचित बनेपछि पुनः जानू र जापू एक बने र नयाँ पार्टी गठन गरे नाम रह्यो –जेएएनयू पेट्रियोटिक फ्रन्ट (जानू–पीएफ) त्यपछि उनीहरुले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित रहेर काम गर्न थाले ।
न्कोमोसँग सम्झौता भएको एक हप्ता नवित्दै मुगावे राष्ट्रपतिमा नियुक्त भए । उनले न्कोमोलाई पनि एक मन्त्रालयको जिम्मा दिए । त्यपछि उनी दत्तचित्त भएर आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढे । सन् १९९५ मा उनले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर देखाइदिए । उनले विद्यालय, खानी, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सुधार गरेर देखाउँदा देखाउँदै उनकी पत्नी सराहको मृत्यु भयो ।
उनले ग्रेस मर्फूसँग विवाह गरे ।
१९९६ पछि उनी जनताले आफूलाई विश्वस गरेर दिएको मतको सहि नतिजा दिनतर्फ लागे । उनी थोरै आराम गरेर पनि जनतालाई खुसी राख्न चाहन्थे । जसले उनीलाई जिम्बावेको हिरो बनाएका थिए, त्यसको कर्जा उनी तिर्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले जिम्बावेका आर्थिक विकास गर्नुपथ्र्यो । उनले सोचे र काला जातिहरुबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य ब्रिटेनहरुले तिनूपर्ने विधान पास गराउन तल्लिन भए । तर उनको यस्तो विरोधाभासि विधेयक उनलाई सफलताको बाटोतर्फ डोर्याउने कुराको बाधा बन्यो । उनको यो काम सफल हुन सकेन ।
त्यपछि उनले मुआब्जा वितरणका लागि सहयोग गर्न आन्य देशको सहयोग मागे । तर ती देशहरुले भने – उसले पहिले जिम्बावेको गरीब ग्रामिण अर्थथन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम नतोडेसम्म अनुदान दिने दिने छैन । मुगावेले बाहिरी देशको सर्त मानेन् र देशहरुले अनुदान दिएनन् ।
उनको दिमागमो यो कुरा चल्दाचल्दै जिम्बावेको आर्थिक अवस्था पुन गिर्न थाल्यो । एचआइभी एड्स, वेरोजगारी, वेदेशिक ऋणलो थिचिएको देशको अवस्था पुन माति उठ्नै सकेन । यस्तो अवस्थामा पनि २००५ को चुनावमा जित निकाल्न सफल भए ।
शक्ति हस्तान्तरण गर्न अस्विकार
उनी सन २००८ को मार्च २९मा राष्ट्रिपतिय चुनावमा विजयी बन्न सकेनन् । उनलाई मोर्गन त्यसेन्जिराईले हराए । तर उनले भोट पुन गणना हुनुपर्ने माग गरे – जुनमा भोट पुन गणना भयो तर उनले जितेनन् ।
मुगावेले सरकारको विपक्षमा आन्दोलन चर्काए त्यसक्रममा उनका केही समर्थक घाइते पनि भए । घाइते समर्थकमाति टेकेर उनले मोर्गनमो नेतृत्व अस्विकार गरे । अन्त्यमा मोर्गनले मुगावेसँग शक्तिा साझेदारीको विषयमा सम्झौता गर्नुपर्यो । मुगावे पुनः सत्ता बराबरको ठाउँमा उभिन सफल भए ।
सन् २०१३ चुनाव
सरकारका र मुगावे दुवैपक्षको सहमतिमा सन् २०१२ मा हनुपर्ने निर्वाचन ०१३ मा सारियो । उनले २०१३ को निर्वाचन ७०,००० धेरै मत ल्याएर जिते । उनको जितको मुख्य पक्ष मुगावेले युरोप भ्रमणका बेलामा बेलेका कुराहरुलाई जान्छ । उनले सबैमा समतमो दृष्टि राखेर हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रंगभेदको विरोधमा बोलेका थिए ।
उनले सो निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत भोट पाएका थिए भने मोर्गनले ३४ प्रतिशत ल्याएका थिए ।
अमेरिकन नागरिकलाई पक्राउ
सन् २०१७को नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको विरोधमा काम गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो । उनले, ‘व्यवस्थित रूपमा सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मको परिष्कृत नेटवर्कको विस्तार, विकास र प्रयोगको साथसाथै केहि ट्विटर खाताहरू चलाएर राजनीतिक अशान्ति जगाउन खोजिएको थियो ।’
यो पक्राउले मुगावेले सामाजिक संजालमा अंकुस लगाउन थालेका आसंका उब्जाउन थाल्यो ।
सैनिक हस्तक्षेप र राजीनामा
उनी सन् २०१८ को चुनावमा ९३ वर्षका पुगरिसकेका थिए तर पनि उनी चुनावमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागि हुन चाहन्थे ।
त्यसै समयमा एक टेलिभिजन च्यानलले सामाजिक सञ्जाल र आर्थिक अभावमा देश लैजानेलाई पक्राउ गरिने समाचार प्रसारण गर्यो । त्यपछि मुगावेलाई सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर गिरफ्तार गरिएको थियो ।
त्यतिवेला विपक्षी दलका प्रवक्ताले सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर सत्ता हत्याको आरोप अस्विकार गरेका थिए । उनले उक्त टेलिभिजनद्वारा राष्ट्रपतिको परिवार र उनी राम्रो अवस्थामा रहेको खवर सुनाएका थिए ।
त्यपछि उने ३७ वर्षे राजनीतिक यात्रा समाप्त भयो ।
मुगावेले सेप्टेम्बर ६, २०१९ मा सिंगापुरमा प्राणत्याग गरे । उनी त्यहाँ केहि महिनाबाट उपचार गराइरहेका थिए ।
जुन समाजसँग उनी जिवनभार बाँचे, जुन समाजमा उनले ३७ वर्ष शासन गरे उनी त्यहाँ प्राणत्याग गर्न असमर्थ भए । देशको गरिबिको कारण आफ्नो देशमा उनले उपचार गराउन सकेनन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा @beenay_sapkota ले तयार पारेका हुन)
प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्दै ! आइतवार, भदौ १, २०७६, २२:५१:००
पौडेल हत्याको बदला लिएरै छाड्छौंः विप्लव अझ निःशस्त्र रुपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनका क्रममा हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र हत्या गर्ने जस्तो गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटना पनि भए । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सर्लाहीको लालबन्दिमा हाम्रो पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलमाथि जुन किसिमको आक्रमण भयो त्यसले सरकारको फाँसीबादी चरित्र पुष्टि गर्दछ । हामी त्यसको डटेर सामना गर्दछौं । मंगलवार, असार १०, २०७६, १२:१५:००